1 Ahene 16 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Ahene 16:1-34
16 Ɛnna Yehowa asɛm baa Hanani+ ba Yehu+ nkyɛn tiaa Baasa sɛ: 2 “Me na memaa wo so fii mfutuma mu+ yɛɛ wo me man Israel so panyin,+ nanso esiane sɛ woafa Yeroboam kwan so,+ na woama me man Israel ayɛ bɔne de wɔn bɔne+ ahyɛ me abufuw nti, 3 merebɛpra Baasa ne ne fie nyinaa akɔ, na mɛyɛ ne fie sɛ Nebat ba Yeroboam fie.+ 4 Baasa ho nipa biara a obewu wɔ kurow mu no, akraman na ebedi ne nam, na nea obewu wɔ wuram no, ewim nnomaa na ebedi ne nam.”+ 5 Baasa ho nsɛm a aka, nea ɔyɛe ne ne nnwuma akɛse no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Israel ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 6 Na Baasa ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no wɔ Tirsa,+ na ne ba Ela bedii n’ade. 7 Bio nso, Yehowa nam Hanani ba odiyifo Yehu so kasa tiaa Baasa ne ne fie,+ efisɛ ɔyɛɛ Yehowa bɔne de ne nsa ano adwuma+ hyɛɛ no abufuw+ sɛ Yeroboam fie, na okum Nadab nso.+ 8 Yuda hene Asa afe a ɛto so aduonu asia mu no, Baasa ba Ela bɛyɛɛ Israel hene mfe abien wɔ Tirsa. 9 Bere a ɔwɔ Tirsa ofiepanyin+ Arsa fie rewe nsa+ bow wɔ Tirsa no, n’akoa Simri,+ nteaseɛnam fã so panyin no bɔɔ ne ho pɔw. 10 Na Simri kɔɔ no so kɔbɔɔ+ no kum no wɔ Yuda hene Asa afe a ɛto so aduonu ason mu, na obedii n’ade. 11 Bere a ɔbɛtenaa ahengua no so dii hene ara pɛ na okunkum Baasa fiefo nyinaa. Wannyaw ɔbarima+ biara anaa ne ho nipa biara a obetumi abɛtɔ were,+ anaa n’adamfo biara. 12 Enti Simri tɔree Baasa fiefo nyinaa ase,+ sɛnea Yehowa asɛm+ a ɔnam odiyifo Yehu so ka tiaa Baasa no te;+ 13 bɔne a Baasa ne ne ba Ela yɛe+ a ɛmaa Israel nso yɛɛ bɔne de wɔn abosonhuhuw no hyɛɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn abufuw+ no nyinaa nti na ɛbaa saa. 14 Ela ho nsɛm a aka ne nea ɔyɛe nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Israel ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 15 Yuda hene Asa afe a ɛto so aduonu ason mu no, Simri bedii hene nnanson+ wɔ Tirsa, bere a ɔman no abɔ Gibeton+ a ɛwɔ Filistifo asase so no ho nsra no. 16 Saa bere no, nnipa a wɔabɔ nsra no nyaa nkra sɛ: “Simri abɔ ɔhene ho pɔw akum no.” Enti Israel nyinaa de ɔsahene Omri+ sii Israel so hene wɔ nsra no mu saa da no. 17 Ɛnna Omri ne Israelfo a wɔka ne ho nyinaa fii Gibeton, na wobetwaa Tirsa ho hyiae.+ 18 Afei bere a Simri hui sɛ wɔafa kurow no, ntɛm ara na ɔkɔɔ ahemfie abantenten mu hɔ, na ɔde ogya too mu hyew ne ho ne ahemfie no, na owui;+ 19 bɔne a ɔyɛe, sɛ́ ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne,+ na ɔnantew Yeroboam kwan so ne bɔne a ɔmaa Israel nso yɛe+ no nti na ɛbaa saa. 20 Simri ho nsɛm a aka ne pɔw a ɔbɔe no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Israel ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 21 Saa bere no, Israel man no mu kyɛɛ abien.+ Ɔman no fã kodii Ginat ba Tibni akyi sii no hene, na ɔfã a aka no nso kodii Omri akyi. 22 Ewiee ase no, Omri akyitaafo no dii Ginat ba Tibni akyitaafo no so nkonim. Ɛnna Tibni wui, na Omri dii hene. 23 Yuda hene Asa afe a ɛto so aduasa biako mu no, Omri bɛyɛɛ Israel hene mfe dumien. Odii ade mfe asia wɔ Tirsa. 24 Ɔtɔɔ Samaria bepɔw fii Semer hɔ maa no dwetɛ dwetikɛse abien, na ɔkyekyee kurow wɔ bepɔw no so, na ɔde bepɔw no wura Semer din too kurow a ɔkyekyee no so, na ɔfrɛɛ no Samaria.+ 25 Na Omri yɛɛ Yehowa ani so bɔne; ɔyɛɛ bɔne sen wɔn a wodii n’anim nyinaa.+ 26 Ɔfaa Nebat ba Yeroboam kwan+ nyinaa ne bɔne a ɔyɛe a ɛnam so maa Israel nso yɛɛ bɔne no so, bɔne a wɔyɛe de wɔn abosonhuhuw no hyɛɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn abufuw+ no. 27 Omri ho nsɛm a aka, nea ɔyɛe ne ne nnwuma akɛse no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Israel ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 28 Na Omri ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no Samaria, na ne ba Ahab+ bedii n’ade. 29 Omri ba Ahab nso bedii Israel so hene wɔ Yuda hene Asa afe a ɛto so aduasa awotwe mu. Omri ba Ahab dii Israel so hene mfe aduonu abien wɔ Samaria.+ 30 Na Omri ba Ahab yɛɛ Yehowa ani so bɔne sen wɔn a wodii n’anim nyinaa.+ 31 Na wammu no hwee+ sɛ ɔbɛnantew Nebat ba Yeroboam bɔne mu,+ na mpo ɔkɔwaree+ Sidonfo+ hene Etbaal babea Yesebel,+ na ɔkɔsom Baal+ bɔɔ ne mu ase maa no. 32 Bio nso osii afɔremuka maa Baal wɔ Baal fie+ a osii wɔ Samaria no. 33 Na Ahab sii ɔbosom dua;+ enti Ahab yɛɛ bɔne de hyɛɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn abufuw+ sen Israel ahene a wodii n’anim nyinaa. 34 Ne bere so na Betelni Hiel kyekyee Yeriko. Ɔde ne ba panyin Abiram twaa so de too kurow no fapem, na ɔde ne ba kumaa Segub twaa so de sisii n’apon sɛnea Yehowa asɛm a ɔnam Nun ba Yosua so kae no te.+
1 Ahene 16